Nnu anthology: oghe leta chefuo | Akwụkwọ dị ugbu a
Akwụkwọ ndị dị ugbu a | 24/11/2021 16:55 | Emelitere ka 25/11/2021 01:14 | Akwụkwọ akụkọ, Ndị edemede, Abụọ, ọtụtụ
Osimiri Punta de Piedras
Anthology nnu bụ ọrụ uri ikpeazụ nke onye edemede Venezuelan Juan Ortiz. Ọ bụ aha mkpokọta nke na-agụnye mkpokọta uri ya niile - itoolu, ruo taa - gbakwunyere akwụkwọ na-ebipụtabeghị: Abụ m, mmejọ. Na nke ikpeazụ, onye odee metụrụ aka na-atụgharị uche na ndụ gburugburu ihe omume nke ọrịa ahụ mgbe ahụmịhe siri ike ya na Covid-19 gasịrị.
N'oge ọ na-arụ ọrụ, Ortiz emewokwa nke ọma na ụdị edemede ndị ọzọ, dị ka akwụkwọ akụkọ, mkpirisi akụkọ, na edemede.. Taa, ọ na-arụ ọrụ dị ka onye nchịkọta akụkọ na onye nchịkọta akụkọ, na mgbakwunye na ịbụ onye na-emepụta ọdịnaya maka ọnụ ụzọ dị ka Ndụ ndụ, akwụkwọ dị ugbu a, ndụmọdụ edemede Oasis na nkebiokwu ọtụtụ uri.
1 Anthology nnu, akwụkwọ ozi mepere emepe echefu echefu (2021)
1.1 Ihe editọ kwuru
1.2 Preamble na akwụkwọ
1.3 Ọdịdị nke ọrụ ahụ
1.4 Isi nke
1.4.1 Nnu Cayenne (2017)
1.4.1.1 Nọmba abụ "XXVI"
1.4.2 Nkume Nnu (2018)
1.4.2.1 Egwu "X"
1.4.3 Ụlọ m nọ, obodo m bi na (2018)
1.4.3.1 Egwu "X"
1.4.4 Ihe ndina (2018)
1.4.4.1 Abụ "XXIV"
1.4.5 Nke mmadụ na ọnyá ndị ọzọ nke ụwa (2018)
1.4.5.1 Iberibe nke uri "XIII"
1.4.6 Na-akpali akpali (2019)
1.4.6.1 Abụ "XV"
1.4.7.1 Abụ "XLII"
1.4.8 Ahụ ndị dị n'ikpere mmiri (2020)
1.4.8.1 Poem "Ọ bụrụ na mụ na ndị mmụọ ozi kwurịtara okwu"
1.4.9 Matria N'ime (2020)
1.4.9.1 Abụ "XXII"
1.4.10 Abụ m, equivocation (2021)
1.4.10.1 Egwu "Anyị bụ mgbape anọ"
2 Banyere onye edemede, Juan Ortiz
2.1 Ọmụmụ na ọmụmụ mbụ
2.2 Mahadum mahadum
2.3 Ọrụ nkuzi na mbipụta mbụ
3 Juan Ortiz na-arụ ọrụ
Anthology nnu, oghe leta echefu echefu (2021)
Anthology nnu, akwụkwọ ozi mepere emepe ka echefu echefu (2021) bụ aha Ortiz kacha ọhụrụ. Ọ bụ mbipụta mbụ ya na mba ofesi ka ọ kwagara Buenos Aires, Argentina, na 2019. Ọrụ ahụ bịara pụta ìhè na usoro mbipụta nke onwe ya na nkwado nke Letra Grupo Editorial seal. Site n'akwụkwọ a, Ortiz na-achọ inye ohere nke convergence na ya nnukwu uri okike, nke na-adịghị obere, ebe anyị na-ekwu banyere 800 poems.
Ihe editọ kwuru
N'okwu onye nchịkọta akụkọ ya, Carlos Caguana: "Anthology nnu ọ bụ ihe karịrị 10 ọrụ na otu, ọ bụ 10 isi nke ndụ onye na-ede uri wetara na lyrics na a mara mma mmiri asụsụ na-atụ uche na-agụsi agụụ ike, na-agụ agụụ ya saline ala, na na-abụ abụ nke ịhụnanya, echefu echefu, ịdị adị, ikpe na-ezighị ezi, ihe ọ bụla kwere omume isiokwu na-emetụta ya n'ụzọ site n'ala ndị a, na Ortiz na-eme ya si. echiche ziri ezi, nke mmadụ na nke siri ike. "
Preamble na akwụkwọ
Ọrụ ahụ na-anata okwu mmalite zuru oke nke edere Onye na-ede uri Venezuelan Magaly Salazar Sanabria —Onye otu kwekọrọ na Academy of Language Venezuelan maka steeti Nueva Esparta. N'ahịrị ya, onye edemede a ma ama na-agbaji ma na-enyocha akwụkwọ ndị ahụ n'otu n'otu dị na aha, na-enye nkatọ ziri ezi site n'ọhụụ uri sara mbara.
N'ime ndetu Salazar Sanabria, ọ pụtara: “… ihe odide a na-edobe ụkpụrụ omume n'etiti ntọala ya. Okwu na-ejigide ugwu na-akwagide ha n'ihi na enwere ọrụ na eziokwu, nnwere onwe na ịkwụwa aka ọtọ nke ọrụ onye na-ede uri, onye edemede ”. Onye na-ede uri na-ekwukwa, sị: "N'amaokwu nke Juan Ortiz, anyị na-aghọta mmadụ na mmetụta ya, nke na-egbu mgbu, anyị na-ahụkwa ya nke ọma n'asụsụ, ebe a na-enwe mmetụta nke iru újú, enweghị enyemaka na iru újú."
Ọdịdị nke ọrụ ahụ
Dị ka e kwuru na mbụ, akwụkwọ ahụ bụ nchịkọta nke ọrụ iri nke na-ejekwa ozi dị ka isiakwụkwọ. Ndị a: Nnu cayenne (2017), Nkume nnu (2018), Ndina (2018), Ulo (2018), Nke mmadụ na ọnyá ndị ọzọ nke ụwa (2018), Na-akpali akpali (2019), Aslyl (2019), Ahụ ndị dị n'ikpere mmiri (2020), Matria n'ime (2020) na Abụ m, mmejọ (2021).
Ọ bụ ezie na akụkụ nke ọ bụla nwere ihe dị mkpa nke ya, ọnụnọ nke ihe ndị dị na mmiri na nke ọ bụla n'ime ha dị ịrịba ama. Nnu, oke osimiri, shells, ndị ọkụ azụ, marera, rancherías ... ihe ọ bụla dị n'ikpere mmiri nwere ọrụ a na-apụghị ileghara anya. A kọwara ihe atụ doro anya nke a site n'abụ e dere n'azụ akwụkwọ ahụ:
"Mgbe ole deekwa maka nnu ọzọ »
Mgbe m agaghịkwa dee banyere nnu
ala oké osimiri na-esikwa n’aka m fepụ.
jide m pen.
Ọ bụrụ na ink agwọghị ya.
ọ gaghị atọ ụtọ dị ka osimiri,
olu ya agaghị adịte aka ma ọlị.
M ga-efunari ahịrị nke gannets,
nka dị mkpa nke marera,
egwu egwu nke shoal nke sardines.
Nnu cayenne (2017)
Ọrụ a na-anọchi anya ọnụ ụzọ nke onye edemede na ụwa uri. N'agbanyeghị na o dere abụ kemgbe ihe dị ka afọ 2005, e bipụtaghị ihe odide ndị ahụ niile ruo mgbe ahụ. Aha ya bụ edere naanị n'agụmagụ uri na uri ndị ahụ enweghị aha, a na-agụ ha nanị n'ihe odide ndị Rom - ihe ga-abụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ akwụkwọ ya ndị ọzọ.
N'agbanyeghị na enweghị metric akọwapụtara, enwere uda na ebumnobi n'abụ ọ bụla. Edeghị ya maka naanị ide ihe, mana enwere ebumnuche mmetụta n'amaokwu na stanza ọ bụla. Enwere ike inwe ekele maka egwuregwu ihe atụ miri emi nke nwere ọtụtụ ihe amaghi ama nke ga-eduga onye na-agụ ịtụgharị uche ugboro ugboro n'abụ ọ bụla.
Oké osimiri na nnu, dị ka ọ dị n'akwụkwọ ọ bụla odee. ha nwere nnukwu ọrụ n'isiakwụkwọ a. Ha na-aga n'ihu na ịhụnanya, ma ọ bụghị na ịhụnanya omenala na njedebe pink, ma juputara na agụụ na echefu echefu.
Nọmba abụ "XXVI"
Debe m ebe ahụ
n'ime ili nke shells pearly;
ebe ajuju nke puku aru dina
na azịza adịghị eleta.
Ogbi nke coral metụrụ anyị aka.
a pearl anyanwụ na ledge
na ebe nchekwa nke ụfọdụ ụgbụ na-echere ọrụ n'ime ụta.
M na-achọkwa fissure na blizzard,
oghere na-ejikọta ihe niile,
njikọ nke jikọtara oghere,
ụzọ ndị gbajiri agbaji n'ọgba,
ruo mgbe ike gwụrụ m na ị na-apụta mgbe m na-atụghị anya gị ọzọ.
Nkume nnu (2018)
N'isi nke abụọ a, nnu na-adịgide, ịhụnanya mgbagwoju anya, ihe atụ, ihe oyiyi, oké osimiri. Nwanyị ahụ na-aghọ ebe mgbaba nke ndị owu na-ama, ma ọbụna ịnọkọ ọnụ, mmadụ anaghị akwụsị ịnọ naanị ya. Enwere agụụ jupụtara na mmachibido iwu n'etiti amaokwu, a truncated akwụkwọ ozi na-achọ utopian ohere nke stanzas ime.
Otú ọ dị, n'agbanyeghị mmasị dị ịrịba ama nke a pụrụ inwe mmetụta, nchefu anaghị akwụsị igosipụta onwe ya dị ka ahịrịokwu, dị ka eziokwu nke na-echere ihe ọ bụla nwere aha. Amụma ka dị ka asụsụ uri, mana a naghị ahapụ ụda olu na ebumnuche n'oge ọ bụla, okwu ọ bụla.
Nkọwapụta bụ na agaghị m esi ọnwụ.
ka ọ dị na mbụ,
nke abalị na anụ ufe ya.
nke ka ha siri kwaga n’ọnụ ụzọ m
wee gbawaa windo m.
na conches ga-akpalite ajọ ifufe n'ire ha pearly;
okporo ụzọ mmiri ga-ewepụ nzọụkwụ gị na nkume ha
na amber nke aha gị ga-asachapụ n'oké osimiri;
M ga-ede ma ọ ga-adị ka m na-echeta gị,
Otu a ka m kacha chefuo.
Ụlọ m nọ, obodo m bi (2018)
N'okwu a, ụlọ nne na obodo - Punta de Piedras - bụ ndị na-akwado ya. The prose ka dị n'asụsụ nkịtị, na nke a A na-eji ihe oyiyi ọdịnala nke ụsọ mmiri ahụ chọọ onye na-ede uri ahụ mma mma na mgbidi ndị ahụ chebere ya na nwata na oge uto ya. Onye edemede ahụ na-ekwusi ike n'ụzọ pụrụ iche n'ihe odide obodo ya, yanakwa nkwenkwe ndị a ma ama bụ́ ndị mere ka ijegharị ya n'ebe nnu ndị ahụ ka mma.
Ọ na-akọwapụta mkpụmkpụ nke amaokwu na stanzas na otu ha si ejikọta ọnụ dị ka akụkọ, site na mmalite ruo ọgwụgwụ. Ụlọ ahụ, n'onwe ya, bụ ihe dị ndụ nke na-atụgharị uche na ndị bi na ya. na ọ na-eche, na ọ maara, nakwa na ọ na-ekpebi ọbụna ndị bi na ya na ndị na-adịghị.
N'èzí mmiri ozuzo na-eme ihe niile.
tinye abalị n'ime ụlọ m.
Ihe na-agwa m,
ma ọ bụ eleghị anya, achọrọ m ka ị gwa m ihe.
Iji mara ihe olu gị na-agafe,
M n'ezie na-eme mmiri
ma zuru ezu n'akụkụ a
ihe kwesịrị ịsacha n'ime.
N'ime akwụkwọ Juan Ortiz, nke a bụ, ikekwe, nke kacha akpali agụụ mmekọahụ niile. Sensuality dị n'amaokwu ọ bụla n'ụzọ siri ike, ọ bụghị n'efu aha ọrụ ahụ. Dị ka ọ dị na ngalaba nke gara aga, a na-edobe mkpụmkpụ nke uri ndị ahụ, na n'obere oghere ha, ụwa dum, nhụta na-apụta.
Onwere ndi nwere ike ghota mkpirisi mkpirisi uri a dika akwukwo di nkenke di nkenke, ebe uri nke ọ bụla na-akọwa isiakwụkwọ nke ịhụnanya na-adịghị adịte aka mana ọ siri ike — Nke nwere ike bụrụ ndụ nye onwe ya. N'ezie, ọ dịghị ụkọ nke egwuregwu okwu, ihe oyiyi na-atụ aro.
Emebere akwa ahụ
ka ọ bụrụ mbara igwe.
Ị na-aga ebe ahụ
yie egwu ma gbajie ka ndu chiburu
ruo mgbe ụwa ga-agwụ.
Nke mmadụ na ọnyá ndị ọzọ nke ụwa (2018)
Isiakwụkwọ a pụtara ìhè maka ịdị ike nke asụsụ onye na-ede uri. Ọ bụ, n'onwe ya, catharsis, mkpesa megide ụdị na ụzọ mbibi ya na mbara ala. Otú ọ dị, e nwere obere mgbalị na mediation nke a na-arịọ ntinye aka nke ọnụnọ nke Chineke iji hụ ma ọ bụrụ na ọgbaghara nke ịdị adị na-anabata ntakịrị.
Prose dị na okwu mkparịta ụka nke abụ ọ bụla. Ihe oyiyi ndị a na-egosi dị njọ, ha bụ ngosipụta nke eziokwu siri ike nke ihe mmadụ na-akpọ akụkọ ihe mere eme.
Iberibe nke uri "XIII"
Ọ bụ ihe niile gbasara ire ọkụ,
nke ụzọ ọkụ nke na-agafe n'ọbara anyị.
Nke na-apịa agbà pearly ruo mgbe ntọala ndị ahụ na-egweri iji kpochie anyị n'úkwù;
ime ka ahụ anyị dị ọcha ruo n’anụ ahụ,
na-ahapụ anyị otú translucent,
kpochapuru n'ikpe-ọmuma nke na ayi ghọrọ enyo;
anyị na-ele ibe anyị anya, anyị na-emegharị onwe anyị
na Ọktọba na-abịa jupụta n'oge oyi.
Usoro ọmụmụ a bụ ọnụ mepere emepe nke enweghị ngwụcha;
je ata, nke ahu bu ihe i biaworo,
Gaa kpụzie ikuku
na-akpa ụgbụ ọkụ nke na-akpụ ndị Olympia na-agafe agafe nke ọtụtụ ego na-ebili elu.
Achọghị m ịbụ ụrọ nke ụbọchị na nrọ a,
ole m gaara akwụ na mkpụrụ ego nke ịkwụwa aka ọtọ - nke kachasị ọnụ - ka ọ bụrụ ahịhịa dị mma nke ahịhịa dị jụụ wee pụọ ngwa ngwa,
mana ahụ dị m mma
Abịara m ịdọwa ikuku asaa nke ụwa ọnụ na agbụrụ m.
Na-akpali akpali (2019)
N'akwụkwọ a, ọ bụ ezie na okwu prose na-aga n'ihu, dị ka nnu na oké osimiri, a na-emesi ike na akụkụ egwuregwu. Ndị na-akpali akpali - dị ka Ortiz na-akpọ ha - na-abịa na-edepụta nke ọ bụla n'ime ihe ndị dị n'ala ha, si Margarita Island. Site na mmiri mmiri ruo na nke ụwa, omenala na àgwà.
Nkọwa nke Juan Ortiz
Iji mezuo nke a odee na-eji nkowa nkenke mana nkenke nke ihe edeputara uri. Ihe ọ bụla na-akpali akpali na-eji aha ihe, ihe ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-ezo aka na ya mechie, n'ihi ya, anyị nwere ike ikwu maka uri dị iche iche nke na-akpọ onye na-ege ntị ka ọ chepụta ihe a na-ekwu tupu amaokwu ikpeazụ ekpughe ya.
Omume ya na-ekpuchi
na mgbe na-esusu ya ọnụ
tụfuo olu ya ọzọ.
Nke a bụ ọrụ nlegharị anya, dịka e dere ya tupu onye na-ede uri ahapụ obodo. Nostalgia dị n'elu, ịhụnanya maka ala, maka oghere mmiri nke a na-agaghị ahụ anya ruo mgbe amabeghị mgbe.. Dị ka ọ dị n’isiakwụkwọ ndị bu ụzọ, a na-enwekarị prose, dịkwa ka ọnụọgụgụ ndị Rom kama ịbụ utu aha.
Asụsụ nke agụụ anaghị akwụsị ịdị ugbu a, ma na-ejikọta ya na ndị na-ahụ maka mpaghara na costumbrista cadres. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ịkwa ụta na ọrụ Ortiz, aha a nwere otu n'ime ihe kachasị mkpa: nke mere site na ịkwaga.
Anọ m na-achọ ịpụ nke ọma.
Ịhapụ bụ nka na,
ime nke ọma, ọ tụrụ ya n'anya.
Ịla n'iyi dịka ọ kwesịrị ịbịa,
ọ dịkarịa ala nnụnụ nke ìhè.
Ihapụ otu a, na mberede,
dị ka nchefu na alaka,
ọ na-efu m na ya.
Ọnụ ụzọ anaghị arụ ọrụ maka m
ma ọ bụ windo, ọ nweghị ebe m ga-apụ,
ebe ọ bụla ọ pụtara na ọ na-apụta gba ọtọ
dị ka enweghị nke na-atụ
na-akpọ m òkù ịlaghachi azụ n'ime ụlọ,
m wee nọrọ ebe ahụ, n'etiti ihe.
dika ngbaghara n'iru ọnwu.
Ahụ ndị dị n'ikpere mmiri (2020)
Isiakwụkwọ a dị iche na nke ahụ e kwuru n'elu n'akụkụ abụọ: uri ndị ahụ nwere aha na-abụghị ọnụọgụ na odee na-abịaru nso na metrics na rhymes ọdịnala. Otú ọ dị, prose ka na-enwe ebe bụ isi.
Ndepụta okwu “Poems of not dabaran ebe ọ bụla” na-ezo aka n'eziokwu na akwụkwọ a na-achịkọta akụkụ dị ukwuu nke ihe odide ndị odee gbasasịrị kemgbe mmalite ya dị ka onye na-ede uri, nakwa na ha “adabaghị” n'ime abụ ndị ọzọ n'ihi isiokwu ha dị iche iche. Agbanyeghị, mgbe ị na-abanye n'ahịrị nke aha a Ihe kachasị mkpa nke Ortiz na-aga n'ihu na-aghọta na akara ndị ya hapụrụ na nwata ya na egwu ya.
Poem "Ọ bụrụ na mụ na ndị mmụọ ozi kwurịtara okwu"
Ọ bụrụ na m na-agwa ndị mmụọ ozi okwu dị ka nna m si eme;
Agara m abụ onye na-agụ uri ugbua,
M gaara wụliri elu n'azụ anya
ma mee ngafe na anụ ọhịa ahụ anyị nọ n'ime.
Ọ bụrụ na m maara ntakịrị asụsụ nke ndị gafere,
akpụkpọ ahụ m ga-adị mkpụmkpụ,
acha anụnụ anụnụ,
ma were nnukwu ọla maapu;
dị ka olu Chineke mgbe ọ na-akpọ n’obi ndị mmadụ.
Ma ọ bụ na m ka gbara ọchịchịrị
na-ege ntị na Eprel na-amali na akwara m,
ikekwe ha bụ gannets m nwere n'aha mbụ,
ma ọ bụ akara nke onye na-ede uri onye m merụrụ ahụ nke ukwuu, na-echetara m amaokwu ya nke ara gba ọtọ na mmiri na-adị ogologo oge;
Ma ọ bụrụ na ọchịchịrị agbaa, ejiri m n'aka na m ga-anọ otu ahụ
ma anyanwụ ga-achọ m ma emechaa dozie akaụntụ
ma na-emegharị onwe m na onyinyo nke na-agwa nke ọma ihe na-eme n'azụ obi;
na-ebelata ihe ize ndụ nke ogologo oge,
megharịa osisi dị na ọgịrịga ahụ,
akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'etiti imeju,
ndị nkịtị na geometry nke ndụ.
A sị nnọọ na m ga-agwa ndị mmụọ ozi okwu dị ka nna m si eme.
ma a ka nwere akwụkwọ ozi na ụzọ,
hapụ akpụkpọ anụ
wee banye n'ime ọchịchịrị jiri aka siri ike, odo odo;
ya na anyanwụ maka obe ọ bụla n'asụsụ mmadụ.
Matria n'ime (2020)
Edemede a bụ otu n'ime mkparị Ortiz, naanị iji tụnyere ya Nke mmadụ na ọnyá ndị ọzọ nke ụwa. En Matria n'ime a na-ese foto nke Venezuela nke ọ ga-esi na ya pụọ ​​na-achọ ọdịnihu ka mma maka ezinụlọ ya, ma na, n’agbanyeghị otú o si gbalịsie ike, ọ dịghị agbahapụ ya.
A na-ewelite ọnụọgụgụ ndị Rom ọzọ n'ihi na abụ ọ bụla bụ obere isi ebe prose na-alọghachi na-emeri. Ọ na-ekwu maka ndụ kwa ụbọchị nke eziokwu nke ụwa dum mara, mana ole na ole chere; agụụ na ume-ngwụ, ịgbahapụ, ịda mbà n'obi na ụzọ ya gbara ọchịchịrị ka a na-adọta, na otu ụzọ isi ga-esi bụrụ ịgafe oke ebe ndokwa na-enye ya ohere.
Ọtụtụ ite iji marinate ndị na-anọghị,
foto ochie iji cheta ihe na-aga,
imechi onwe ya n'ime ihe dị mkpa, chefuo,
pụọ obere oge ka ịhụ ma ihe niile mere.
ma megharịa usoro ahụ ma ọ bụrụ na ọ ka na-agba ọchịchịrị n'èzí.
Ọtụtụ n'ime anyị enweghị ike ịgbaso usoro a,
Ya mere, anyị ghọrọ parrots, anyị na-akwa nku si n'ọbara
anyị wee pụọ n’ụgbọ elu gbasasịrị agbasa ka anyị hụ ma ọ̀ abụrụla n’ofe mgbidi ahụ.
Abụ m, mmejọ (2021)
Nke a bụ mmechi nke akwụkwọ ahụ, na naanị ọrụ a na-ebipụtabeghị dị ugbu a n'ihe ndekọ niile. Njirimara ederede poems isiokwu dị iche iche na Ortiz gosipụtara njikwa ya n'ụdị uri dị iche iche. Mgbe ahụ, Ọ bụ ezie na amụma amụma ya maka prose bụ ihe a ma ama, ọ na-ejikwa ọtụtụ ụdị uri ọdịnala Spanish n'ụzọ dị mma., dị ka spinel nke iri, sonnet ma ọ bụ quatrains.
Abụ m, mmejọ bilitere mgbe isiakwụkwọ siri ike na ndụ onye edemede: ịlanarị Covid-19 yana ezinụlọ ya na mba ọzọ na site n'ụlọ. Ahụmahụ ndị e biri ndụ n'oge mgbasa ahụ adịghị ụtọ ma ọlị, ma e nwere abụ abụọ na-akọwa ya n'ụzọ siri ike.
Onye na-ede uri na-abụkwa ndị enyi nwere obi ha hapụrụ. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile bụ ọdachi na ngalaba a, a na-emekwa ememe ndụ, ọbụbụenyi na ịhụnanya, karịsịa nke ọ na-eche maka nwa ya nwanyị bụ Julia Elena.
Egwu "Anyị bụ mgbape anọ"
ayi bụru mgbawa anọ;
enwere ezumike n'aha,
Nkeji ọ bụla bụ obodo n'ọchịchị aka ike,
Ekwesịrị ilebara usoro ndị ahụ anya nke ọma ka a ghara ịbanye n'agha.
Otu a ka ndụ siri mee anyị:
ike, dị ka achịcha nke ụbọchị;
akọrọ, dị ka mgbata mmiri;
ndị isi nke ịgbachi nkịtị.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị na oghere ndị ahụ siri ike,
ruo oke oke ala,
Ọnụ ọ bụla gbawara agbawa dabara nke ọma nke na-esote.
mb͕e achikọta-kwa-ra ha nile;
na tebụl, n'ihu efere nke ụbọchị,
e mechiri fissures,
anyị bụkwa ezinụlọ n’ezie.
Banyere onye edemede, Juan Ortiz
Ọmụmụ na ọmụmụ mbụ
A mụrụ onye edemede Juan Manuel Ortiz na December 5, 1983 na obodo Punta de Piedras, Margarita Island, Nueva Esparta state, Venezuela. Ọ bụ nwa onye na-ede uri bụ Carlos Cedeño na Gloria Ortiz. N'obodo a dị n'akụkụ oke osimiri Caribbean ọ gụrụ akwụkwọ mmalite na ụlọ akwụkwọ ọta akara Tío Conejo, agụmakwụkwọ bụ isi na Tubores School na Ọ gụsịrị akwụkwọ na Bachelor of Science na La Salle Foundation (2000).
E mesịa mụọ ihe Licenciatura en Ozi na Universidad de Oriente Nucleo Nueva Esparta. Otú ọ dị, mgbe afọ atọ gachara, ọ rịọrọ ka a gbanwee ọrụ ya gaa n'Ịgụ Integral, mkpebi nke ga-aka ụzọ ndụ ya. Afọ ise ka e mesịrị e nwetara aha ya n'asụsụ na akwụkwọ (2008). N'ime oge a, ọ zụlitekwara ọrụ nke guitarist agụmakwụkwọ, nke ga-emecha jeere ya ozi nke ukwuu na ọrụ ya.
Ọrụ nkuzi na mbipụta mbụ
O siri ike nweta akara ugo mmụta ya Unimar webatara ya (Mahadum nke Margarita) na malitere ọrụ ya dị ka onye prọfesọ mahadum. N'ebe ahụ ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nkụzi nke akwụkwọ akụkọ, akụkọ ihe mere eme na nkà, site na 2009 ruo 2015. Mgbe e mesịrị, Unearte (University of Arts) jikọtara ọnụ, bụ ebe ọ kụziiri klas nkwekọrịta na-etinye aka na guitar na ngwá ọrụ. N'oge ahụ, ọ rụkwara ọrụ dị ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ Anyanwụ nke Margarita, ebe o nwere ohere "Transeúnte" wee malite " edemede edemede" ya na mbipụta mbụ ya: N'ọnụ ndị alligators (akwụkwọ akụkọ, 2017).
Bybọchị, dee nyocha maka portals Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Onye na-ebuli ndụ, Ndụmọdụ ederede Oasis y Akpaokwu gbakwunyere abụ ma na-arụ ọrụ dị ka onye nchịkọta akụkọ na onye nchịkọta akụkọ.
Juan Ortiz na-arụ ọrụ
N'ọnụ ndị alligators (akwụkwọ akụkọ, 2017)
Ụlọ ebe m bụ obodo m bi (2018)
Na-akpali akpali (2018)
Oke osimiri dị nsọ (agụmagụ uri, 2018)
Onye na-agafe agafe (nchịkọta akụkọ sitere na kọlụm nke Margarita anwụ, 2018)
Akụkọ sitere na mkpu (Akụkọ egwu, 2020)
Anthology nnu (2021)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Anthology nnu, akwụkwọ ozi mepere emepe ka echefu echefu